जनकपुरधाममा जलाइयो प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला
जनकपुरधाम– जनकपुरधाममा प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन गरिएको छ। ओलीले संसद विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै विपक्षी पाँच दलीय गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन गरेका हुन्। उनीहरुले ओलीले पुनःस्थापित भएको संसद पुनःविघटन गरेर प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै संयुक्त रुपमा जनकपुरधाम नगर प्रदर्शन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शन जनकपुरधामको रेल्वे […]
राष्ट्रपति भेट्न प्रधानमन्त्री ओली शितलनिवास
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्या देवि भण्डारीलाई भेट्न शितलनिवास पुगेका छन् । बालुवाटारमा आज साझ बसेको स्थायी कमिटी बैठक सकेर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगेका हुन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली साँझ सवा ७ बजे राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगेका हुन् । सोमबार सर्वोच्च अदालतले भोली (मंगलबार) साँझ ५ बजेभित्रै प्रधानमन्त्रीमा […]
राष्ट्रपति भेट्न शितलनिवास पुगे प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगेका छन् । माधव नेपाल पक्षका केही नेताहरु समेत सहभागी स्थायी कमिटी बैठक सकेर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगेका हुन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली साँझ सवा ७ बजे राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगेका हुन् । सोमबार सर्वोच्च अदालतले मंगलबार साँझ ५ बजेभित्रै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नु भन्ने परमादेश दिएपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिँदैछन् । प्रधानमन्त्रीले आजै र
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज सिन्धुपाल्चोकको बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्र हेलम्बु र मेलम्चीको अवलोकनका लागि आएका छन् ।प्रधानमन्त्री ओली अहिले हेलिकप्टरबाट ओर्लिएर हेलम्बु क्षेत्रमा रहेका छन् भने यसपछि मेलम्ची क्षेत्रमा पुग्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओली मेलम्ची घ्याङमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीसँग छलफलपछि गणेश बगर जाँदैछन् । उनले मेलम्ची आयोजनाको मुख्य सुरुङको हवाइ निरीक्षण पनि गर्ने कार्यक्रम छ ।प्रधानमन्त्रीका साथमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलगायत रहे
काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका हुन् । आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भनि प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत परेको छ भने विपक्षमा १२४ मत खसेको छ । सोमबारको बैठकमा उपस्थित २३२ सांसदमध्ये १५ जना तटस्थ बसेका छन्... The post प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त appeared first on Purbeli News.
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट बाहिरिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली संसद बैठक सुरु हुन अगाडि नै संसद भवनबाट बाहिरिएका हुन्।...
वामदेव गौतमलाई भेट्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनको निवास भैंसेपाटी पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आफूनिकट नेताहरूलाई लिएर भैंसेपाटी पुगेका हुन्।